जसका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठक, उही नजाने! - हिमाल दैनिक
जसका लागि बोलाएको सर्वदलीय बैठक, उही नजाने!
काठमाडौँ २८ भाद्र २०७८, सोमबार १२:१८
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले नजाने भएको छ ।
संघीय संसदको ९ औं अधिबेशन सुरु भएदेखि नै नेकपा एमालेले संसद अबरुद्ध गर्दै आइराखेको छ । संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य सभामुख सापकोटाले आज संघीय संसद् भवनमा रहेको लोत्से हलमा अपराह्न २ः३० बजेका सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले ) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र ) का संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपाल,जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता महन्थ ठाकुर, जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) का प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का राजेन्द्र लिंदेनलाई आमन्त्रण गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । तर उक्त बैठकमा भने एमाले नजाने बताएको छ ।
आइतबार पनि संसद् बैठक दुई पटक बसे पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी मङ्गलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । अवरोध हटाउन सभामुख सापकोटाले आइतबार प्रतिपक्षी दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए ।
अघिल्लोआज सर्वदलीय बैठक बस्दै
पछिल्लोएनआरएनएको निर्वाचन स्थगित